Misy fomba fametrahana 3 indrindra ao amin'ny hotely.
■ Napetaka anaty rindrina
Ny efijery LED napetraka ao anaty rindrina dia midika hoe apetraka eo afovoan'ny sehatra. Amin'ny lafiny roa amin'ny sehatra dia misy ny tabilao KT, sary hoso-doko na lamba firakotra lamba firakotra, izay mamela ny olona hahita sary fotsiny. Ity karazana efijery LED ity dia matetika apetraka amin'ny hotely. Mpanatrika manazava ny efijery LED, ny mpanjifa dia afaka mahita ny kalitaon'ny horonantsary alohan'ny hamandrihany trano fandraisam-bahiny, ary ny ankamaroan'ny maodelin'ilay hotely dia P3 P4, na P5 aza.
■ Fametrahana karazana natambatra
Ny efijery LED lehibe napetraka eo afovoan'ny afovoany, efijery kely roa napetraka amin'ny andaniny roa, mamorona sehatra ambaratonga miaraka amina endrika feno. Mahafinaritra ilay sary an-tsary, rehefa milalao ilay horonan-tsary. Rehefa natomboka ny fampakaram-bady dia ny fampielezana ny fampakaram-bady no sarimihetsika lehibe, ary afaka milalao horonantsary mahafinaritra ny efijery roa.
Orinasa marobe matetika no mampiasa an'ity takelaka Type ity amin'ny fivoriana fanao isan-taona.
■ Sarimihetsika Led lehibe ho an'ny kaonferansa
Ny ambadiky ny sehatra iray manontolo dia efijery LED lehibe, ny sary famantarana rehetra, ny sary ary ny sary dia aseho amin'ny alàlan'ity efijery LED lehibe ity, afaka mahita 360 ° tsy misy zoron'ny efijery LED ny vahiny.
Orinasa maro no nampiasa izany tamin'ny kaonferansa ny vokatra.